Stanford University inokurudzira kushandiswa kweApple Watch pakurapa | Ndinobva mac
Stanford University, inonzwika senge inopfuura imwe, nekuti yaive nzvimbo iyo Steve Jobs akapa hurukuro yemanzwiro iyo vazhinji vachiri kuyeuka. Apple yanga ichiedza kwenguva yakati kutarisa Apple Watch kuwedzera kune iyo iPhone, sechinhu chakakosha muhupenyu hwezuva nezuva hwevashandisi, kuitira kuti kuburikidza nemaapplication akasiyana ayo aanobatanidza uye anogona kuiswa kuburikidza neApp Store. te tine kunyatso kutonga pamusoro pehutano hwedu nekutenda kune HealthKit uye CareKit mapuratifomu, iyo inoisa varwere mukuonana navanachiremba munguva pfupi chaiyo.
Stanford University yakatanga chirongwa chitsva umo icho chinopa iyo yepakati fakitori nevarairidzi neApple Watch yekuenderera mberi nekutsvaga pane chishandiso mundima yehutano. Kunze kwekugovera chiuru chimwe cheApple Watch pakati pevashandi vane hunyanzvi hwekutsvagisa uye vanoratidza kufarira kwairi, yunivhesiti inopa mutengo we $ 10.000 kuchirongwa chinokunda. Chirongwa chekutsvagisa chichatangwa neStanford University chichatanga muna Kubvumbi wegore rino.
Isu tinofarira kwazvo mapurojekiti akanyanya anokanganisa kufambiswa kwemakiriniki mukati mevanhu vakasarudzwa.
Chishandiso cheApple chinofanira kuve chakabatanidzwa muchirongwa chakajairika uko kugona kwayo kuona (chiyero chezviitiko, moyo wemutinhimira ...) inoshandiswa kuyera maitiro ehuwandu hwevanhu vanoitirwa kudzidza kwakadai. Iyi purojekiti ichatarisawo iyo mhinduro mapurojekiti anoshandiswa kutaurirana ruzivo rwakaunganidzwa nechigadzirwa pamusoro pekukwanisa kuigovana nenzira yakasununguka uye inoshanda kupfuura kusvika zvino. Mhinduro dzese dzinounzwa dzinofanirwa kushandisa chishandiso cheIOS uye chinofanira zvakare kusanganisira yekuwedzera kana dhizaini yekufambisa, uko kuziviswa kunogona kuendeswa kuApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Stanford University inokurudzira kushandiswa kweApple Watch pakurapa
Chizvarwa chekutanga iPod nano mu "dhirowa rekukanganwa"